Al-Shabaab iyo Ciidamo dowladda oo dagaal ku dhexmarey degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha Hoose. - Awdinle Online
Home News Al-Shabaab iyo Ciidamo dowladda oo dagaal ku dhexmarey degmada Awdheegle ee Gobolka...
Al-Shabaab iyo Ciidamo dowladda oo dagaal ku dhexmarey degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
November 5, 2019 (AO) – Dagaal khasaaro kala duwan geystay oo Saacadihii la soo dhaafay Ciidamo katirsan kuwa dowladda & Ururka Al-Shabaab ku dhexmaray Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kasoo baxaya Faah faahino dheeraad ah .
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dhacay degmada Awdheegle,waxaana uu yimid,kadib markii xubno katirsan Al-Shabaab ay weerareen Saldhig Ciidamo katirsan dowladda ku leeyihiin Awdheegle,waxaana halkaasi ka dhacay dagaal mudo saacad ku dhow socday.
Saraakiil katirsan Ciidamo ka tirsan Dowladda ayaa waxaa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab,isla markaana khasaaro ay ku gaarsiiyeen.
Dhinaca kale Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyada weerarkaas ayaa waxaa ay sheegeen inay dagaalkaas ku dileen askar katirsan Ciidamada Dowladda wallow aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijinaya.
Mararka qaar waxaa dhaca dagaalo u dhaxeeya Ciidamada Dowladda & Al-Shabaab, Deegaano katirsan Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa saraakiisha Ciidamada Dowladda & Shabaab ay ka kala sheegtay Guulo kala duwan.
Previous articleSafiyo Khaalid oo xubin ka noqotay golaha degaanka Gobolka Main ee dalka Mareykanka.
Next articleDaadad Xoog Dadan Oo Buux Dhaafiyay Kaamam Ku Yaala Magalada baydhabo